एकदम हो । यसमा विप्लव माओवादीको कुनै हात छैन । हामीले जिल्लाका सबै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरुसँग बुझिरहेको छौं ।
स्कुलले पटक–पटक हामीसँग सहयोगको माग गरेपछि हामीले जग्गासहित स्कुललाई १२ कोठे पक्की भवन सहयोग गरेका हौं । पछि स्कुल नजिकको जग्गा स्कुललाई भोगचलन गर्न दिएपछि स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक÷शिक्षिका, राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेर स्कुलको रोहबरमा नजिकै रहने गरी शालिक निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको हो । हामीले सहमति अनुसार नै स्कुल नजिक मात्र बनाएका हौं ।
माओवादी बारबार कुरा उठाउँछ बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हाल्यो, जेल कसले हाल्यो ? किन हालियो ? जेल हामीले हैन उसैको कुकर्मले गर्दा राज्यले हाल्यो राज्यसँग रिस गर्ने, हामी परिवार गुमाएका पीडितमाथि हैन । के हामीले आफ्नो गुमेको परिवारको याद गर्न नपाउने ? के हाम्रो परिवारको सम्झनामा केही सामाजिक कामहरु गर्न नपाउने ? माओवादीको रिस एक जनासँग छ भने सबै परिवार नै सत्रु सम्झने ? सबै परिवार नै सखाप पार्नुपर्ने ? किन हाम्रो अभिभावक मारेको ? यत्रो वर्षपछि पनि किन माओवादीले हामीमाथि नै रिस गर्छ कारण न्यायको साहारा लिँदा हैन ? हाम्रो अभिभावकमाथि रिस रहेछ मारिए हामी नाबालक हुँदा बुबालाई मारियो बुबा बिनाको जीवन कस्तो हुन्छ एकपटक सम्झेर हेर ? यदि रिस गरेको भए माननीय जनार्दन शर्मालाई अथितिको निमन्त्रणा गर्ने थिएनौ होला । आज हामी आफ्नो अभिभावकलाई सम्झन चाहान्छौं उहाँको नाममा सामाजिक काम गर्छौं के त्यो पनि गर्न पाउदैनौं हामीले ? ६ बर्षको थिए बुबाको हत्या गर्दा सेतो कपडामा पशुपतिको एक कोठामा राख्दा मलाई थाहा थिएन मेरो बुबा मारिएको भन्ने । सधैँ परीवारको आखामा आँशु हुने गथ्यों हुँदाहुँदै पढ्न एक छाक खानको लागि समेत अरुको शरणमा बस्नु पर्दाको पीडा ताजा नै छ ।
तनहुँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता शुरु
दमौली । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि तनहुँ जिल्लामा दर्ता कार्य शुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको तस्वीर खिचेर जिल्लामा सोमबारदेखि परिचयपत्र वितरणका ल